» पुल निर्माणमा ढिलाई किन ?
पुल निर्माणमा ढिलाई किन ?
४ माघ २०७५, शुक्रबार १४:३२
मकवानपुर । मकवानपुरगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ र ५ को गढी आमभञ्ज्याङ जोड्ने पक्की पुल निर्माण कार्यमा ढिलाई गरिएको छ । गत २०७४ साल चैत्र ११ गतेभित्र बनिसक्नुपर्ने पुल हालसम्म अधुरै छ ।
तत्कालिन जिल्ला विकास समिति र हालको जिल्ला समन्वय समितिले काठमाडौं कोटेश्वरको नागार्जुन शंकरमाली जेभी निर्माण कम्पनीलाई ५ करोड ३७ लाख ९२ हजार ३ सय ५ रुपैया ३० पैसामा २०७३ साल पौष ११ गते निर्माण गर्न ठेक्का दिएको थियो । तर हालसम्म पुलको पिल्लर समेत पूरा बनेको छैन ।
पुलको लागि पिल्लर राख्न खनिएको खाडल खनेर छोडेकै एक बर्ष भइसकेको छ । पुल निर्माण कार्य पूरा नभएको विषयमा बुझ्दा जिल्ला समन्वय समितिका इञ्जिनियर त्रिभुवन झाले करीब १८ महिनादेखि ठेकेदार सम्पर्क विहिन रहेको मात्र नभई सन्तोषजनक काम पनि नगरेकोले म्याद थप नगरिएको र म्याद थपका लागि उचित कारण पेश गर्न बारम्बार पत्राचार नै गर्दा पनि ठेकेदारले नटेरेको बताए ।
पुलको निर्माणका लागि रनिङ बिल बापत ९५ लाख भुक्तानी भैसकेको जानकारी दिईएको छ । त्यति मात्र होईन ठेकेदारले स्थानीय कामदारहरुको ज्याला समेत नदिएको मजदुरहरुले बताएका छन् । यसमा ठेकेदार कम्पनीका दिपक सापकोटा ढिलो हुनु आफ्नो कमजोरी भएपनि म्याद थप गरेमा आफूहरुले बनाउने बताउँदै आएका छन् । तर हाल दुई वर्षसम्म पिल्लर समेत निर्माण पूरा नगरेको र पुल निर्माणको प्रगति हेर्दा पुल निर्माण नै नहुने आशङ्का गरिएको छ ।